The Irrawaddy's Blog: မေမြတ်နိုး Facebook မှာ တွေ့ရတဲ့ အားပေးတိုက်တွန်းမှုများ
မေမြတ်နိုး Facebook မှာ တွေ့ရတဲ့ အားပေးတိုက်တွန်းမှုများ
မေမြတ်နိုး ဆီက သရဖူ ပြန်သိမ်းကြောင်း ကိုရီးယားမယ်ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ဘက်က ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မေမြတ်နိုးရဲ့ပရိသတ် အများအပြားက သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အားပေးစကားတွေ ၀င်ပြောထားကြပါတယ်။
အားတင်းထားဖို့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ တိုက်တွန်းထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Good Luck sis!! Do ur best in future,never look back to past!...........5thinggg!
အမှန်တရား ဆိုတာ အချိန်တန် ရင် ပေါ်မှာပါ သမီး မေမြတ်နိုး…
မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ နိုင် ငံတကာ Beauty Pageant အဖွဲ့ အစည်းတွေ သမီးနောက်မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးကြမှာပါ…
အမှန်တရားကို အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ပေးကြပါမယ်…
ရှေ့ ဆက် အ ကောင်း ဆုံး ကြိုးစားပါ…
I couldn't believe that it was happened.
Don't be upset about that sis, u havealong and brighter future.
Keep in mind that 'Once Miss Asia Pacific World;
Always Miss Asia Pacific World.'
So get over it my sis. Fighting.
ဘာမှခံစားမနေ့နဲ့အခုဖြစ်ပျက်နေတာကို သင်ခန်းစားယူပြီးတော့ အကောင်းဆုံးနဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားပါ စစ်ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေရှိနေတယ်နော် အားတင်းထား
Fighting chit nyi ma lay!!!!!
I belief in your ability!!!!!!
Sis May Myat Noe, keep fighting, cheer up, wish you well...
ဘယ်သူဘာလုပ်လုပ် ဘာပြောပြော မေမြတ်နိုးဟာ ထာဝရ Miss Asia Pacific World နဲ့ ဂျူးစံသာဟာ ထာဝရ Miss Globe Myanmar ပဲ ။ အတိတ်ဘ၀ကအကြွေးရှိခဲ့လို့ သူတပါးကောက်ကျစ်တာကိုခံရတယ်ပေါ့ ညီမရယ်..။ ပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ရှိလာမှာပါ ။ ဒီထက်ပဲပိုကောင်းအောင် ပိုတော်အောင်ကြိူးစားကြပါ ညီမတို့ ။ May Myat Noe Jue San Thar
''မြတ်နိုးလေး'' မေမြတ်နိုးဆိုတာမြန်မာပြည်သူတွေရင်ထဲမှာအခိုင်မာအသိမှတ်ပြုထားပီးသား။Fighting Sis!!!
International Miss လောကမှာ Myanmar နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြု ပြီး Crown ၇တာ Miss ညီမလေး May Myat Noe တစ်ယောက်ဘဲ၇ှိတာပါ
အားပေးတော့လည်း အတိုင်းထက်လွန် ဝေဖန်တော့လည်း....???????
ကျွှန်တော်ကတော့ Miss ညီမလေး
( May Myat Noe ) ၇ဲ့Real Fan တစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ ( ၇င်ထဲမှာ နာကြင်လွန်းလို့ )
Myat Noe Don't get distressed about anything, sis lay. We're with you. Take care and be strong.
ဘာမှ လှည့်မကြည့်နဲ့ ဂရုလည်းမစိုက်နဲ့.......
အမြင့်ကိုတက်နေတာ အနောက်က ဆွဲချတဲ့လူဆိုတာရှိမှာပဲ ဒါပေမယ့် သူတို့ထက် အမြင့်ဆုံးရောက် သွားရင် ဆွဲလို့ မရတော့ဘူးမြတ်နိုး ကိုယ်ကကိုယ်လမ်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်တတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ Miss တွေကြားမှာ အကြီးမှားဆုံးဆုကို ရခဲ့တာပဲ ကျန်တာက တော့သူတို့ အပိုင်းပဲ ပေးပြီသား ပစ္စည်းကို ပြန်ယူတယ်ဆိုကတည်း ဘာပဲပြောပြော ကလေးဆန်တယ်
Peace....... Haaaa Haaaaaa မြန်မာနိုင်ငံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ အလုပ်တွေအများကြီးဖြတ်ထားတာ လုပ်လို့ ရသွားပြီ....
Fighting .... ဘယ်လို အခက်အခဲ တွေဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ မင်းအနားမှာ အမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲ။....
Don't worry sis may myat noe ,..... it is notabig wrong in your life., we loveu., just come back to myanmar, we waiting u , fighting my lovely sis ,....... — with Minn Zay Yar and7others.
ဘာမှမပူနဲ့ အဲ့သရဖူ က တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ မေမြတ်နိုး ဆိုတဲ့ လူကသာ တန်ဖိုးရှိတာ။ သရဖူများ အိမ်မှာတောင် ကိုဘောင်းညီမလေးတွေ ဝယ်ဆောင်းနေတာ ပိုတောင်ပိုနေသေးတယ်။ သူတို့လိုချင်ရင် အိမ်မှာရှိတဲ့နှစ်လုံးလောက်တော့ ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဘာမှစိတ်ထဲမထား နဲ. နော် ။ အ၇င်ကတည်း က အဲဒီသရဖူက ညီမကောင်းပေါ် မ၇ှိပါဘူး အခု ပြန်ယူတယ်ဆိုတော.လည်း ပေးလိုက် ပေါ့ ။ ညီမမှာ ချစ်တဲမေမေ၇ှိတယ် သူငယ်ချင်းတွေ၇ှိတယ် ချစ်တဲ့ပ၇ိတ်သတ်တွေလည်း၇ှိတယ် ။ အဓိကကဆက်ကြိုးစားဖို့ပါပဲ Fighting Sister lay ......Your Big Big brother
ကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာအရည်အသွေးကြောင့် Crown ရတယ်လို့ သဘောထားပါလို့.....
လူတယောက် ဘာကြောင့်ကျရုံး ရုံး
အဲ့ဒီ လူအောင်မြင်တုန်း ဘေးမှာ အတူရှိပြီး အားပေး ခဲ့သလိုပဲ
ကျရုံး လည်းအားပေးရမှာ လူ လို အသိဥာဏ် ရှိတဲ့ လူ တယောက်ရဲ့ အလုပ်
အောင်မြင်တုန်း မှာတော့ ဘေးနားကပ် အားပေးနေပြီး
မအောင်မြင်တော့မှ အပြစ်တွေတင် (မင်းကိုအားပေးခဲ့ရတာ ခုတော့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ပေါ့)
အဲ့လိုလူတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန် ထဲပြန်ကြည့်ပါ .... ဒီလောကမှာ အပြစ်ကင်းဖြူစင်တဲ့လူ တယောက်မှမရှိ !!!!!!!!!!!
သူများကို အပြစ်တွေတင် ကဲရဲ့နေရအောင် မေးပါရစေ ခင်များတုိ့က ဘုရားတွေလား ?
ဘယ် ဘာသာပဲကိုးကွယ် ကိုးကွယ် မြန်မာနိူ်င်ငံသား ဖြစ်နေတာနဲ့တင် ကိုယ့် နိူင်ငံသားဆိုတဲ့ အသိထည့် ပြီးး မှားမှားမှန်မှန် ကာကွယ် ပေးတတ်တဲ့ အတ္တလေး တော့ ရှိသင့်တယ် ...............
We r here with u sweetheart
Don't giveaF**k about everything...!!!!!! Just come back Myanmar.......
We havealot of work to do with you .........
We love u......... အကိုတို့ မင်းကိုကိုယ့်ညီမလေး အရင်းလို ချစ်တယ်
Don't giveaFUCK about everything...!!!!! N Just come back Myanmar.......